ဂျနီဖာ Dress PDF ကိုအပ်ချုပ်စံနမူနာအရွယ်အစား 4-18 – အဆိုပါ Tailoress
နေအိမ် / အမြိုးသမီးမြား / အဝတ်အစား / ဂျနီဖာ Dress PDF ကိုအပ်ချုပ်စံနမူနာအရွယ်အစား 4-18
SKU: 567 categories: အဝတ်အစား, အမြိုးသမီးမြား Tags:: ခန္ဓာကိုယ် con, ခန္ဓာကိုယ်ပုံ, အဝတ်အစား, မိန်းကလေး, ဂျာစီ, ရှည်လျားစားဆင်ယင်, နွေရာသီ, အမြိုးသမီးမြား
ဂျနီဖာ Dress PDF ကိုအပ်ချုပ်စံနမူနာ
ဤသည်မှာအားလုံးချုပ်ဖို့ရှည်လျားယူပါဘူးတဲ့ comfy နှင့်လက်တွေ့စားဆင်ယင်ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာလှုပ်ရှားမှုလွယ်ကူခြင်းအဘို့အခြမ်းအလျားလိုက်အပေါက် features. အဆိုပါဘော်လီစီတန်းနေသည်.
တစ်ဦးက 1.5cm ချုပ်ရိုးထောက်ပံ့ကြေးပါဝင်ပါသည်.
ထိုကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး Jennifer စားဆင်ယင် tutorial ဤနေရာတွင်သို့မဟုတ်ဤစာမျက်နှာ၌ဖွင့်လှစ်ဖို့အောက်က tab ကိုနှိပ်ပါ.
အဝတ်အစား: Copyshop အရွယ်အစား: 62စင်တီမီတာက x 148cm / A4 စာမကျြနှာ: 24 / အမေရိကန်ပေးစာ: 24
facing: Copyshop အရွယ်အစား: 30စင်တီမီတာက x 71cm / A4 စာမကျြနှာ:6/ အမေရိကန်ပေးစာ: 6
သုံးသပ်ချက်ကိုရေးပေးပါ။ဂျနီဖာ Dress PDF ကိုအပ်ချုပ်စံနမူနာအရွယ်အစား 4-18” ပြန်ကြားချက်ကိုပယ်ဖျက်